Software updates – Windows – Page 19 – Vessoft
Software updates – Windows – Page 19
Comodo 8.2.0.4792 AntiVirus, Internet iyo Firewall
Antiviruses xirmo software antivirus The si ay u ilaaliyaan aad computer. software wuxuu bixiyaa joogsatay ammaan ee network iyo kormeera gaadiidka ee khatar gelin kara.
Saxannada Programka sirta Ku haboon qalab inay la shaqeeyaan DVD drives. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka boodo ilaalinta DVD iyo nuqul ka kooban yahay sida uu u qabtay faylasha ama image ISO.
Helitaanka Remote Software si ay u maareeyaan computer ka fog. Software waxay bixisaa xuquuqda helitaanka kombiyuutaro kale u adeega tayada.
English, Français, Español, Deutsch... WTFast 3.5.9.511 iyo 4.0.5.616 beta
Imtixaanka Tool si aad u hesho macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka qalliinka. Software soo bandhigayaa sifooyinka qalabka rakiban.
Graphics iyo design Qalab ee lagula socdo arrimaha gudaha ee sawiro 3D. Software soo bandhigayaa naqshadda faahfaahsan oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee dhismaha iyo tas-hiilaadka kale.
English, Français, Español, Deutsch... Genymotion 2.6.0
Saxannada Software waxay abuurtaa DVD ama USB ah drives bootable. Software waxaa si weyn u isticmaala milkiilayaasha kombiyuutarada aan drive ah indhaha.
English, Українська, Français, Español... Carambis Driver Updater 2.4.2.9632
Wadayaasha software The si aad u ogaato iyo rakibi darawallada dhacsan yihiin ama la la'yahay. software ka kooban a saldhiga wadayaasha badan oo casri ah ka soo saarayaasha qalabka.
English, Français, Español, Deutsch... Avira AntiVir 15.0.15.129 Free, Pro iyo Internet
Antiviruses The antivirus caanka ah si ay u ilaaliyaan nidaamka ka dhanka ah hanjabaado kala duwan oo fayrusyada. software waa ay xakameyn karaan aalado network iyo xaddido helitaanka internetka ee dadka waaweyn.
العربية, English, Français, Español... Ezvid 1.0.0.3
Qabashada Screen Qalabka awood leh in ay qabsadaan video ka shaashadda. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan video ama maqal ah, ka dhigi Screenshot, edit iyo dar kala duwan ee saamaynta.
aTube Catcher 3.8.9
Youtube Tool download videos adeegyada video caan ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo files si qaabab caan ah oo arkaysid ee qalabka kala duwan.
English, Українська, Français, Español... Adobe Reader 11.0.10
Extensions PDF software ah in la documents of format PDF shaqeeyaan. software waxa uu qabtay ee loo baahan yahay qalab si aad u eegto, print iyo lasocodsii files PDF.
Phone Software waafajinta xogta u dhexeeya qalabka HTC iyo computer ka. Waxa ay taageertaa update si toos ah darawallada qalabka.
English, Français, Español, Deutsch... Sandboxie 4.2 iyo 5.07 beta
Qaar kale waxay Agabka in uu ordo software ee deegaanka hal mar la taaban karin. Software wuxuu ka hortagaa keydinta xogta ku saabsan shaqada ee codsiyada orodka ee kaydinta macluumaad kasta.
العربية, English, Українська, Français... IncrediMail 2.5
E-mail Software ee maamulka email. Fursadaha Wide waxay diyaar u yihiin user aad ku qorshayso xarfaha iyo reserved software ah baahidaada gaarka ah.